एजेन्सी । एक मानिसको ८०० बच्चा कसरी हुनसक्छ ? हरेक हप्ता कसरी कसरी पिता बन्न सक्छ रु यो कुरा सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला ? कुरा यस्तो रहेको छ ।
वास्तवमा साइमन वाट्सन नामका यी मानिस स्पर्म डोनर हुन र उनले सामाजिक सञ्जालको माध्यमले आफ्नो ब्यापार चलाइरहेका छन् । अहिलेसम्म उनी ८०० बच्चाहरुको पिता बनिसकेका छन् । हरेक हप्ता स्पर्म देखि ताइवानसम्म कही न कही उनका बच्चा जन्मिरहेका हुन्छन् । यही क्रममा स्पर्म डोनेट गर्दै गएमा अबको २ देखी ३ वर्षमा उनका १ हजार भन्दा बढि बच्चा हुनेछन् ।
सामाजिक सञ्जालमा यस्ता धेरै मानिसहरु छन् जो उनीसँग धेरै कम मुल्यमा स्पर्म खरिद गर्छन् । किनभने, यदी कुनै क्लिनकबाट स्पर्म खरिद गर्न पर्यो भने त्यसको लागि धेरै महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ । त्यसैले धेरै मानिसहरु स्पर्म किन्नको लागि सिधा वाट्सनसँग सम्पर्क गर्छन् ।
वाट्सन सबैभन्दा धेरै बच्चाको पिता बनेर रेकर्ड बनाउन चाहन्छन् । उनी एक नियमित समय अन्तरालमा आफ्नो पुरा शरिरको चेकअप गराँउछन र हेल्थ सर्टिफिकेट अनलाइनमा पोस्ट पनि गर्छन् । उनी पुरै प्रमाणित तरिकाले यस व्यापारमा लागेका छन् र धेरै मानिसले उनको बारेमा थाहा पाइसकेका छन् ।
केही आलोचकहरुले भने उनको यो कामलाई विरोध गर्ने गरेका छन् । उनीहरुका अनुसार कसैले पनि उनीमाथि कानुनी कारवाही गर्न त सक्दैनन् तर यो काममा एउटा सानो गल्तीको कारणले पनि स्थिति बिग्रन सक्छ । किनभने, यो कुनै मजाक होइन ।